१७ जनाले श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएर ५ बच्चाहरूकी आमालाई गरे सामूहिक बलात्कार
बिहिबार २५ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौं । पाँच बच्चाकी आमालाई दर्जन भन्दा धेरै व्यक्तिले गलत बलपूर्वक सम्पर्क कायम गरेका छन् । मंगलबार राति १७ जनाले ५ बच्चाहरूकी आमालाई मुफस्सिल थाना क्षेत्रको गाउँमा सामूहिक रुपमा यो घटना गराएका थिए । महिला आफ्ना पतिसँगैं बजारबाट घर फर्किरहेकी थिइन् ।
घर आउँदै गर्दाको समयमा घटना भएको बताइएको छ । आरोपितले महिलाको पतिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । बुधवार, पीडितको बयानमा प्रहरीले आरोपित राम मोहली लगायत १७ जनाको विरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेको छ । घटनाको जानकारी पाएपछि डीआईजी सुदर्शन कुमार मण्डल र एसपी अम्बर लकरा प्रहरी चौकी पुगेका थिए र अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पीडितका पतिले भने कि गाउँमा हरेक मंगलबार बजार लाग्ने गर्दछ । उनी आफ्नी श्रीमतीसँग राति लगभग ८ बजे बजारबाट घर फर्कदै थिए । त्यो बीचमा लगभग १७ जना केटाहरू बाटोमा आएका थिए ।
अचानक पाँच जना केटाहरूले उनलाई समाते भने दुई जना उनकी श्रीमतीलाई लिएर गएका थिए । उनले बाँकी केटाहरूले आफ्नी श्रीमतीलाई झाडीमा लगेर गएको बयान दिएका छन् । त्यहाँ केटाहरूले पालैपालो उनकी श्रीमतीमाथि त्यो नसोचेको कार्य गरेका हुन् । घटनापछि, सबै जनाले कसैलाई भने पछि बाँकी नराख्ने भन्दै चेतावनी पनि दिएका थिए ।
घटनामा संलग्न राम मोहली उनकी श्रीमतीलाई पहिलेदेखि नै चिन्थे । जबकि बाँकीले चिनेका थिएनन् । त्यहाँ सामूहिक घटनाको कुरा थाहा पाएपछि डीआईजी र एसपी मुफस्सिल प्रहरी चौकी पुगेका थिए र महिलाबाट सम्पूर्ण घटनाको बारेमा जानकारी लिएका छन् ।
महिलाको बयानका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । प्रहरी टोली राम मोहलीको खोजीमा गयो तर फेला पार्न सकेको छैन । एसपीले भने कि एक आरोपीको पहिचान भएको छ । आरोपितको खोजीमा प्रहरी तिव्र रुपमा लागेको छ ।
प्रहरीले यो हदसम्म गर्न सक्छ ?
फिल्मी शैलीमा श्रीमतीद्धारा श्रीमानलाई धोका !
श्रीमतीमाथी गरेको यो कार्यको घोर विरोध गर्दै कारबाहीका लागि सर्वत्र सेयर भइरहेको यो भिडियो
मथुराको वृन्दावनस्थित यमुना नदीमा जे देखियो जुन विश्वास गर्न जोकोहीलाई गाह्रो पर्न सक्छ
मावनतालाई लज्जाबोध पार्ने यो एउटा घटना
डाक्टरले मृत घोषितपछि निकालिएकी महिला चल्न थालेपछि अक्सीमीटर लगाउँदा अक्सिजन ९९ र नाडी ५०
दिपक मनाङ्गे मन्त्री बनेपछि पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले मुख खोले
अनौठो तरिकाले लुकाएर ल्याएको डेढ किलो सुन नेपालको विमानस्थलमा भेटियो
नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटको कारभित्र मृत फेला परेका ३ जना बालकको कसरी मृत ?
६४ लाख लुट्न महिलाको ज्या’न लि’ने अ’पराधि